ကဗျာဝ ကမ်းခြေ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်း၍ ကမ်းခြေ သာ?? - Yangon Media Group
ကဗျာဝ ကမ်းခြေ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်း၍ ကမ်းခြေ သာ??
ရေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၃
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ် ကဗျာဝပင်လယ်ကမ်း ခြေသို့ လာရောက်လည်ပတ်သူ များပြားလာသည့်အတွက် ကမ်းခြေအား စနစ်တကျကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကမ်းခြေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ထိန်းသိမ်း ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်း၍ ကမ်း ခြေသာယာလှပရေးနှင့်ကမ်းခြေ ပတ်ဝန်းကျင်၌ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သူများ စည်းကမ်းတကျလုပ်ကိုင်ရန် စိစစ်ကြပ်မတ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ရေးမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
အဆိုပါကော်မတီတွင် ရေး မြို့နယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ငါးဦးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တို့မှနာယကအဖြစ်ပါဝင်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရေးမြို့နယ် ခေါဇာမြို့အုပ် ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ကိုကိုကဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကာ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ လူမှုအဖွဲ့အ စည်းများအပါအဝင်၊ စုစုပေါင်း ၂၂ ဦးဖြင့် နိုဝင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်က ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးဖြစ်သည်။ ”လည်ပတ်သူများလာတာနဲ့အမျှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေများလာတယ်။ ဆိုင်တွေက စည်းကမ်းမဲ့ စွန့်ပစ်တာတွေ၊ ကမ်းခြေစည်ကားလာသလို ဈေးဆိုင်ခန်းတွေ စည်းကမ်းမဲ့ဆောက်လုပ်လာတာတွေ ကြောင့် ကမ်းခြေကိုစနစ်တကျကြီး ကြပ်ဆောင်ရွက်ဖို့ ဖွဲ့စည်းရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ရေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်ညွန့်က ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့အနေဖြင့် ကမ်း ခြေသာယာလှပရေးအတွက် စီမံချက်များရေးဆွဲအကောင်အထည် ဖော်ခြင်းအပါအဝင် သဲသောင်ပြင်တွင် ရွှေ့ပြောင်းဈေးသည်များရောင်းချခြင်းမပြုလုပ်ရေး၊ လာရောက်လည်ပတ်သူများ အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေရေး၊ ထွက်ရှိလာသောစွန့် ပစ်ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျစွန့် ပစ်ရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကမ်းခြေအတွင်း သဲတူးဖော်ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်းမပြုလုပ်ရေး၊ ဆိုင်ခန်း နှင့်အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာမှခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ ဆောင်ရွက်စေရေး စသည့် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
မကွေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ပျူလူမျိုး(ခေါ်) တောင်သားလူမျိုးများ ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံပွဲကျင်?
လာလီဂါ သမိုင်းတွင် အနီကတ်အများဆုံး ပြသခံရသူအဖြစ် ရာမို့စ် စံချိန်တင်
ပြင်ဦးလွင်၌ ခရီးသည်တင်မှန်လုံယာဉ်ပေါ်တွင် ခရီးသည်တစ်ဦး ပြင်ပဒဏ်ရာမရှိဘဲ သေဆုံးနေ
အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်း မဟုတ်သေးကြောင်း စပါးကွင်းလယ်လူ အဲရစ်ဆင် ဝင့်ကြွား
၁ဝ နှစ်ကြာ မျှော်လင့်ချက်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရမယ့် ခြင်္သေ့မလေးများ